Herisetra ao an-tokantrano ►Endreha ny sainao rehetra ◄
Herisetra ao an-tokantrano ►Raha mahita ny fanalahidinao rehetra
Home » Herisetra ao an-tokantrano ►Raha mahita ny fanalahidinao rehetra
Iray amin'ireo lohahevitra farafahakeliny vao haingana ny momba ny herisetra ao an-tokantrano, ary ny herisetra amin'ny fampidirana am-ponja. Izany dia noho ny zava-misy tany amin'ny lohatenin'ny vaovao, ny fisehoan-javatra nataon'ireo sehatra samihafa ao amin'ny rafitra sosialy dia tsy mitsahatra miseho ary io no iray amin'ireo olana fototra izay Diabe ho an'ny tsy fananana herisetra manenjika aza.
Ny herisetra ao an-tokantrano dia voarakotry ny lalàna heloka bevava, izany hoe manana ny votoatiny sy ny lalàna mifehy azy izy ireo izay mitsara ny olona izay manao heloka bevava eto amin'ity faritra ity. Raha misy olona tafiditra amin'ny olana amin'io karazana io, dia tsara ny mandinika mitady mpisolovava manohana ny herisetra an-tokantrano, satria afaka matoky tena izy ireo amin'io raharaha io izay manampy amin'ny famahana ny olana tahaka ny efa nitranga.
Mijanona ao an-tokantrano ny herisetra amin'izao andro izao ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra izay manana ny fiaraha-monina, ary izany no samy hafa satria fifandirana ara-tsosialy ao anatin'ny hitranga foana izany fihetseham-po votoatiny toy ny herisetra an-tokantrano dia tafiditra, herisetra collectif LGBT na any amin'ny mpikambana hafa ao amin'ny fianakaviana, ankizy, vehivavy na olon-dehibe, ankoatra ny vondrona hafa.
Ny heloka amin'ny herisetra amin'ny ankapobeny dia tafiditra ao amin'ny lalàna vy ao an-tokantrano ao anatin'ny fehezan-dalàna kriminiela. Raha mijaly amin'ny toe-javatra toy ny voalaza ao amin'ny fehintsoratra teo aloha ianao dia ilaina ny mankany amin'ny manampahefana mahefa na mitady fanampiana matihanina hamaha ity toe-javatra ity.
1 Herisetra an-tokantrano: Famaritana
2 Ny fehezan-dalàna momba ny herisetra an-tokantrano
2.1 Inona no fantatsika momba ny lalàna momba ity karazana herisetra ity?
2.2 Inona no azontsika lazaina fa tena mahery vaika tokoa ny herisetra?
3 Tantara momba ny herisetra eo amin'ny sehatra anatiny
3.1 Andron'ny herisetra an-tokantrano
4 Fikambanana miady amin'ny herisetra
5 Karazana herisetra ao an-tokantrano samihafa
5.1 Famonoana herisetra an-tokantrano ary inona no tokony hatao aloha
5.2 Herisetra ao an-tokantrano
5.3 Herisetra an-tokantrano LGBT
6 Herisetra an-tokantrano manoloana ny lehilahy: inona ny fomba fijerin'ny olona
6.1 Lehilahy novonoin'ny herisetra an-tokantrano
6.2 Azontsika atao ve ny manondro ny patriarka ho fiandohan'ny herisetra?
7 Ireo toetra mampiavaka ny herisetra ao Espaina
7.1 Fifanekena ho an'ireo niharan'ny herisetra an-trano
Herisetra an-tokantrano: Famaritana
La famaritana ny herisetra an-tokantrano Tsy dia hoe izay asa herisetra miseho ao anatin'ny teny manondro araka ny nambara tamin'ny teny ihany, "domo", izany hoe trano na an-trano. Io herisetra an-tokantrano dia mazàna no natao ny iray ao amin'ny fianakaviana mpikambana hafa, ka anisan'izany ny herisetra miainga amin'ny asa ny fampiasana ny hery ara-batana, fandrahonana, fandrahonana na ny fandrahonana.
Tokony hitranga izany ao anatin'ny tokantrano ary tsy maintsy ataon'ny olona ao amin'ny fianakaviana mankany amin'ny mpikambana hafa ao amin'io fianakaviana io ihany. Ity karazana fianakaviana na herisetra ao an-tokantrano ity dia ahitana ny:
Herisetra ara-batana, izay midika hoe fihetsika mamely ny olona.
Herisetra ara-nofo, ho an'ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana.
fandrahonana, na ara-batana na ara-tsaina
Herisetra ao an-tokantrano
Fanenjehana na fanararaotam-pahefana izay midika ho fahaverezan'ny fahaleovantena.
Iray amin'ireo ny toetra mampiady herisetra ao an-tokantranoIzany dia fa tena sarotra ny hanisa ny tena tahirin-kevitra, satria matetika ny fanilikilihana ara-tsosialy ary matetika ampahibemaso mihazakazaka fitarainana ny herisetra an-tokantrano isaky ny asa nataony. Sarotra ho an'ny manampahefana ny mitazona firaketana feno momba ny herisetra ao an-tokantrano mahazatra kokoa noho ny mahazatra. Momba ny vanim-potoana mihabetsaka kokoa na amin'ny ambaratonga sosio-ekonomika mahazatra kokoa.
Ilaina ny hangataka fanampiana, ary katsaho ny vahaolana ara-dalàna dia hoe amin'ny tondro ny herisetra an-tokantrano sy ny fitokana-monina ara-tsosialy ny olona na ny fianakaviana vokany dia satria araka ny fanadihadiana ny herisetra an-tokantrano, matetika tsy tonga voatatitra ary tsy Eny, natao ho an'ny mpikambana hafa ao anatin'ny faritr'ireo namana.
Ny fehezan-dalàna momba ny herisetra an-tokantrano
Maro no resahina momba ny fehezan-dalàna momba ny herisetra ao an-tokantrano, ary izany dia Matetika no miresaka amin'ny lalàna momba ny herisetra amin'ny lehilahy.
Ny zavatra voalohany mba hanazavana dia ny hoe na dia samy tarehimarika matetika mitranga ao an-tokantrano, ary nangonina ao anatin'ny 173 sy 153 ny Fepetra Famaizana lahatsoratra karazany roa ny herisetra samy hafa be, na dia tsy misy intsony ny karazana herisetra ny zava-drehetra.
Inona no fantatsika momba ny lalàna momba ity karazana herisetra ity?
Herisetra ao an-tokatrano ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana Io no iray ampiasain'ny olona ao amin'ny fianankaviana, izany hoe eo amin'ireo olona izay miaina ao amin'ny ivontoerana iray ihany. Izany dia natao hiarovana ireo niharam-pahavoazana maro izay mety hitranga ao anatin'ity vondrona ity ary tena sarotra ny miala amin'ny rohy misy eo anelanelan'izy ireo.
Ireo tranga izay mety hitranga ao anatin'ity antokom-pinoana ity dia tena malalaka, izany no mahatonga ny lalàna hamela ny varavarana ho amin'ny fandikana samihafa, satria mazàna no mifantoka amin'ny vahoaka vulnerable, na amin'ny fitondrana fikarakarana fitsaboana. Noho izany dia ilaina ny mandinika ny tranga tsirairay mba hahafantarana izay heverina ho herisetra amin'ny ankapobeny sy izay tsy.
Noho izany ny fanontaniana Inona no dikan'ny herisetra ao an-tokantrano?, dia azo havaozina ho toy ny iray izay mitranga eo anivon'ny fianakaviana na trano iray. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny herisetra an-tokantrano ianao Ilaina ny mandeha any amin'ireo toeram-pitsaboana manokana momba io lohahevitra io, ao anatin'izany ireo mpiasa sosialy, mpahay lalàna sy mpitsabo manam-pahaizana no hanome izay rehetra mila fampahalalana sy fepetra ilaina amin'izany.
Inona no azontsika lazaina fa tena mahery vaika tokoa ny herisetra?
Ny lalàna momba ny herisetra amin'ny ankapobeny dia manamarina fa ny fandikana azy io dia ny fampiharana herisetra, ara-batana, ara-tsaina na ara-pihetseham-po amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrona manaraka:
Mpivady, mpivady na mpivady taloha
Ry mpivady, na dia tsy miaina miaraka amin'ny mpanafika aza izy raha misy ifandraisany mafy aminy.
Ny taranaka, zanaka, ny fianankaviana, ny havany akaiky, ny havana akaiky, dia tsy maintsy miara-miaina amin'ny olona rehetra izy ireo.
Mpiasa tsy afa-manao na amin'ny fiahiana ny ray aman-dreny, fiahiana, fiahiana na fiahiana ny vady.
Olona voarakitra ao anatin'ny tarika mpiray tanindrazana miaraka amin'ny mpanafika.
Ireo olona vulnerable izay eo ambanin'ny mpiambina sy ny fitazonana any amin'ny foibe public or private.
Amin'izao fotoana izao, noho ny krizy ara-toekarena dia maro ireo olona voatery hiverina any amin'ny ivontoeran'ny fianakaviana teo aloha, ary niara-nipetraka, ka nahatonga ireo sehatra vaovao ho an'ireo mpianakavy akaiky.
Ny heloka bevava natao teo anelanelan'ny mpiray efitra fotsiny, Tsy misy ao anatiny izany ny hevitra momba ny herisetra an-tokantrano, satria na dia voatery miara-mivelona aza izy ireo mba hizara ny fandaniana, dia samy hafa ny fahalalahana. Ao anatin'izany dia tsy misy fifandraisana ara-pihetseham-po, na amin'ny alalan'izy ireo na amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana izay ao an-trano ihany koa.
Herisetra an-tokantrano araka ny OMS, dia milaza fa ny isan-jaton'ny herisetra atao amin'ny vehivavy no ataon'ireo mpiara-miasa na mpiara-miasa taloha dia ambony lavitra noho izay mety hohadinan'ny vahiny. Izay mitarika ho amin'ny toe-piainana ara-pihetseham-po sy ara-batana izay manimba azy ireo ara-psikolojika, satria iharan'ny herisetra foana izy ireo.
Ireo herisetra rehetra nihatra taminy dia nanatsara ny mety hisian'ny olana ara-pahasalamana goavana amin'ny fotoana lava sy midina.
Tantara momba ny herisetra eo amin'ny sehatra anatiny
An-jatony ny herisetra ao an-tokatrano na ao anaty aterineto dia misy fifanoherana izay nitranga tao anatin'ny fianakaviana iray, tsy nanavakavaka. Ary na dia amin'izao andro izao aza dia mbola misy hatramin'izao lehilahy novonoin'ny herisetra an-tokantranoAmin'ny tranga mahazatra dia matetika no vokatry ny vehivavy iray na ny heloka bevava fankahalana ny lehilahy amin'ny vadin'ny vehivavy.
Izany antony izany dia nanomboka ny fisarahana teo anelanelan'ny herisetra naterak'ireo lehilahy tao amin'ny toeram-pianakaviana sy ny fijalian'ny vehivavy. Ary amin'ny ampahany betsaka amin'ny lehilahy dia ampijalin'ny lehilahy hafa ao anatin'ny antsoina hoe herisetra ao an-tokantrano ny lehilahy, ary ny vehivavy dia atosiky ny lehilahy, fa tsy ny vehivavy hafa, farafaharatsiny amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Noho izany, ny antony nahatonga ny fizarazarana dia noforonina tao anatin'ny lalàna momba ny herisetra an-tokantrano, antsoina hoe herisetra amin'ny herisetra ao amin'ny CP corpus momba ny herisetra an-tokantrano
Andron'ny herisetra an-tokantrano
Tsy misy andro iray amin'ny herisetra ao an-tokantrano manokana, nefa misy Andro iraisampirenena herisetra atao amin'ny vehivavy. Ny novambra 25 isaky ny fankalazana ny taona 1981. Izy io dia mikendry ny hanaitra ny saina sy hanaitra ny saina momba ny herisetra ateraky ny vehivavy eo amin'izao tontolo izao, satria izy ireo dia toy izany.
Noho izany antony izany dia tena manan-danja tokoa amin'ny manaraka manana fahalalana momba ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava izay misy herisetra an-tokantrano, hahafantarana hoe aiza no ahitana ireo zava-misy samihafa ary tsy mihevitra fa ny fitsarana rehetra dia tsaraina amin'ny fomba mitovy ihany.
Fikambanana miady amin'ny herisetra
Fikambanana samihafa izay manolotra fanampiana ho an'ireo olona nandalo ny herisetra an-tokantrano sy ireo tranga misy herisetra amin'ny vehivavy manerana izao tontolo izao. Ary izany tokoa Herisetra an-tokantrano, fisaraham-panambadiana ary fanitsiana ara-tsaina Mety ho sarotra sy maharitra izy ireo. Ny olona mandalo dia mila manana fitsaboana ara-tsaina, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, trano sy vondron'olona iray manampy azy ireo hanakatona ny tsingerina.
Misy ny tsy misy farany raharaha momba ny herisetra an-tokantrano, satria paradigmà izay mahafaoka olona samihafa, avy amin'ny lehilahy, tanora, vehivavy, ankizy na antitra. Ny tranga tsirairay dia tsy mitovy ary manohana ny fikambanana samihafa miady ho an'ny iray.
Karazana herisetra ao an-tokantrano samihafa
Herisetra ao an-trano: ny fahasimbana ateraky ny vatana, ratra, mangana, mangana, vokatry ny tebiteby, fanosihosena na fanipika ankoatra ny hafa.
Asan'ny herisetra: ny devaluation, ny tahotra, ny fandrahonana, ny fidradradradrana na ny fialonana.
Herisetra ara-piraisana ara-nofo: herisetra ara-nofo sy fametrahana. Fanararaotam-pahefana eo amin'ny olona voakasika mba haka an-keriny ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy mety.
Herisetra ara-toekarena: Tena mahazatra izany ary matetika no misavoritaka. Ny fandaniam-bola na ny fitaintainana novolavolain'ny iray amin'ireo antoko dia tsy manana izany, dia matetika ary manala baraka.
Famonoana herisetra an-tokantrano ary inona no tokony hatao aloha
Mety ho maro ny herisetra ao an-tokantrano ary izany no mahatonga ny maro hanontany tena hoe inona no tokony hataonao manoloana ny herisetra amin'ny ankapobeny. Ny heloka bevava ataon'ny herisetra ao an-tokantrano dia sazin'ny lalàna, noho izany, raha miaina ity karazana zavatra tsara indrindra ity ny olona iray dia ny manatona ny polisy hametraka fitarainana hitady vahaolana.
Ny iray amin'ireo fepetra izay matetika manontany ireo niharam-boina rehefa mitranga izany karazana herisetra izany dia izy ireo maka sary herisetra an-tokantrano, satria izany dia hanampy amin'ny fizahan-tany mba hanaporofoana ny zava-mitranga niseho. Io no iray amin'ireo fanandramana fototra izay azon'ny mpisolovava ampiasaina handresena ny raharaha.
Zava-dehibe ny handinihana ireo tranga rehetra ireo, indrindra fa ny olona izay nanao ny heloka bevava dia mandoa ny saziny ary amin'ny tranga sasany dia afaka mahazo fanampiana. Ary nisy iray koa tena zava-dehibe dia ny antony heloka bebe kokoa ny herisetra an-tokantrano hitsara ny fehezan-dalàna famaizana, tranga bebe kokoa ny herisetra an-tokantrano azo noforonina, ka mahatonga ny ady ara-dalàna dia miha-tsotra mba hamaha satria misy kokoa ny toe-javatra sy fijoroana ho vavolombelona manohana ny porofo sy ny didim-pitsarana havoaka.
Pihetseham-po herisetra an-tokantrano dia izay mitady hanafika ny olona amin'ny alalan'ny fandrahonana-pihetseham-po, mampiasa ny fihetseham-po mba hahazo anjara ao amin'ny Asan'ny Apostoly izay hanafika ny soatoavina na ny mahaliana azy, satria tsy mba mahatsapa ratsy ny olon-kafa, amin'ity tranga ity ilay mpamono olona.
Herisetra an-tokantrano LGBT
Ny herisetra LGBT ao an-tokantrano dia iray amin'ireo antony vaovao izay tokony hampidirina amin'ny fampianarana, antontan'isa ary lalàna. Ary ity modely vaovao momba ny fianakaviana ity dia tsy hita popoka tato anatin'ny folo taona farany ary tonga ny fotoana hahatsikaritra fa manao heloka bevava, herisetra ary herisetra toy ny any an-trano hafa.
Herisetra an-tokantrano manoloana ny lehilahy: inona ny fomba fijerin'ny olona
Ity angamba ny iray amin'ireo hevi-dehiben'ny herisetra amin'ny herisetra, Maro no mihevitra fa ny lehilahy dia maty noho ny herisetra an-tokantrano, aza manisa fahafatesana.
Izay tsy maintsy mazava dia ny herisetra rehetra dia mitovy ary ny fiainana rehetra dia manana ny lanjany ao anatin'ny fiarahamonina. Ny antony mahatonga ireo vonoan'olona ireo, ary ny olona izay mampihatra azy dia tsy mitovy amin'ny hoe mitranga noho ny herisetra ataon'ny lehilahy.
Lehilahy novonoin'ny herisetra an-tokantrano
Matetika dia maty ny ankamaroan'ny lehilahy eo am-pelatanan'ny lehilahy hafa, ary noho ny antony samihafa tsy mifankahazo foana. Mifanohitra amin'izany, ny herisetra atao amin'ny vehivavy eo amin'ny sehatra an-tokantrano dia matetika novokarin'ny lehilahy sy ny lamina mitovy amin'izany.
Azontsika atao ve ny manondro ny patriarka ho fiandohan'ny herisetra?
Mpandalina maro no mametraka ny endriky ny fianakaviana patriarika toy ny loharanon'ny herisetra an-tokantrano ary ny lahy sy ny vavy. Rehefa nanomboka nahafantatra azy ireo ny kolikoly, dia nanomboka nanangana sampan-draharaham-piarovana izy ireo toy ny fehezan-dalàna momba ny herisetra amin'ny herisetra sy ny herisetra.
Ny tantara no sandoka manodidina ny fahambonian'ny lahy sy ny vavy ny lahy, àry fametrahana ny fianakaviana, misolo tena mafy orina ny fanjakana hery (namorona ny olona) raha mbola afaka foana koa filaminana sy hibaiko ny alalan 'ny fianakaviana ireo fotopampianarana ireo patriarika mety ho "fianakaviana tsara".
Io hery sy ny fetraketraky ny toetrany io ary tokony ho rafitra iray ao amin'ny fianakaviana dia namorona ambaratongam-pahefana sy herisetra izay ankehitriny, rehefa navoaka ny foto-pinoana maro, dia manohy ny fahatanterahan'ilay hevitra, izany no lehilahy ao an-trano ary ny fanjakana (masculine) ao amin'ny fiarahamonina, izay tokony hifehy sy hifehy ny fanatanterahana ny didiny rehetra.
Ny herisetra ao an-tokantrano dia tsy toe-javatra izay mitranga ao amin'ny firenena na ao anatin'ny kolontsaina sasany. Maro no mety hieritreritra fa any amin'ny firenena mandroso, ny herisetra ao an-tokantrano dia ambany kokoa, na ny fehezan-dalàna momba ny herisetra amin'ny ankapobeny dia mahomby kokoa noho ny any an-tany hafa izay heverina ho fivelarana.
Saingy marina izany ho an'ny herisetra an-tokantrano any Etazonias, izay iray amin'ireo firenena lazaina fa be mpampiasa indrindra, dia manana endrika mampiady herisetra ao an-tokantrano, satria ao amin'ny 2015 fotsiny dia mihoatra ny vehivavy 1600 no novonoin'ny lehilahy izay nitazona azy ireo na nitazona fifandraisana.
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny vokatr'ireo herisetra ao an-tokantrano dia manimba, satria raha farany amin'ny farany dia mamono azy ireo, ny famoizana fianakaviana dia tena lehibe, mamokatra ny vitsy indrindra amin'ny trano tsy simba ara-batana sy ara-tsaina.
Ity karazana fitondrantena ity dia mitranga eo amin'ny saha ara-tsosialy rehetra, na inona na inona toe-draharaha ara-toe-karena misy, herisetra ao an-tokantrano sy ny herisetra mihatra amin'ny lehilahy, tahaka ny tranga malaza momba ny herisetra an-tokantranon'i Osvaldo Rios. Ity olona ity dia mpilalao sarimihetsika fanta-daza fanta-daza izay misy fitarainana maro momba ny herisetra an-tokantrano.
Tena mampidi-doza ny fiakaran'ny herisetra ao an-tokantrano, ary ilaina ny mandika izany amin'ny fanamelohana ireo trangan-javatra izay mijaly, satria io no hany fomba hahafahana mandao izany ary miezaka hitarika fiainana tsaratsara kokoa.
Ireo toetra mampiavaka ny herisetra ao Espaina
Ao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana ny herisetra an-tokantrano ao Espaina dia misy karazana herisetra isan-karazany, ka ny toetra mampiavaka ny herisetra ao an-tokantran-dry zareo no anisan'izany.
Noho ny harena ara-dalàna, ankehitriny dia afaka mamaky zavatra maro avy amin'ny herisetra an-tokantrano ao amin'ny faritra Espaniola, mampatanjaka sy matanjaka ity vatana ity ary miatrika fitsaràna amin'ny herisetra mihatra amin'ny fehin-kevitra sy ny lanjany ara-dalàna.
Fifanekena ho an'ireo niharan'ny herisetra an-trano
Rehefa misy herisetra tsy misy fiafaràna, ny fikambanana sasany dia manome ireo olona ireo amin'ny fandrafetana asa isan-karazany, amin'izany fomba izany no ahafahan'izy ireo mandao ny zana-pianakaviana, lasa mahaleo tena ary mahazo ny herimpo hanamelohana ireo hetsi-panoherana mahery vaika izay niaretany.